ငါ့ကိုနင်မေ့သွားတဲ့အခါ..သေချာတာတစ်ခုက..ငါနင့်ကိုမမေ့ပါ: November 2008
ရွေးနိုင်ပါတယ် . . . ။
တကယ်လို့ . .
သေအောင်ထိုးခွဲခဲ့ပါ . . . ။
မင်းကံကောင်းပါတယ်ချစ်သူ . . .။
ငါဟာကံဆိုးသူပေါ့ . . . ။
Posted by mhyaw lint at 4:57 AM
ချစ်သူရှိရာ အရပ်ဆီကိုပေါ့ ..... ။
စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းလှပါဘိ .....။
အား ...... နာလိုက်တာ
ဆိုင်ကယ်TAXI ၊ ဆိုက္ကား CARRYတွေပေါ့
ကျွန်တော့်ဘ၀ CARRY သမားလက်အောက်မှာ
Posted by mhyaw lint at 7:02 PM
ရင်းနှီးမှုပြုရတယ် . . .
မွေးဖွားရတယ် .. ..
အသက်ဝင်လာတယ် ... ....
စကားလုံးဟာလဲ ကွယ်ပျောက်သွားမှာပါ .... .. ။
Posted by mhyaw lint at 5:16 PM
သူသိမှာ ဟုတ်ပါဘူးလေ ....။
Posted by mhyaw lint at 3:17 AM
နောက်ဆုံးကွာ . . .
နောက်တစ်ယောက်တွဲလည်း ချစ်မှာပဲ . . . ။
Posted by mhyaw lint at 3:10 AM
Internet ပေါ်က စမ်းတ၀ါးဝါး
Chatting ထိုင်ကာ ကြိုးစားကျက်မှတ်လိုက်သည်မှာ
Zorpia Blogger မကျန်
ရှိသမျှ Q လို့ရသည်မှန်းသမျှ
ဆန်းမီပုံကပါ .. ပါလိုက်သေး … ။
Online ပေါ်မှာ ရေတိမ်မနစ်ခဲ့ဘူးလေ ….. ။
ကျွန်တော်ပို့တဲ့ Comment တချို့တ၀က်
Account ကို Signout လုပ်ကာ
မနည်းလစ်ပြေးခဲ့ရတယ်လေ .. .. ။
Chatting ထိုင်ဖို့ လမ်းထိပ်က
အော် … … ငါ့အဖြစ်က
Posted by mhyaw lint at 6:22 AM
Labels: ကျွန်တော်ရေးတဲ့Online ပေါ်က အချစ်
သို့သော် … သို့သော်နဲ့
လစ်လျူရှု့လို့ မရလို့ပါ . . .
Posted by mhyaw lint at 8:14 AM
ငါ … တချိန်က
Posted by mhyaw lint at 5:30 PM
တော်ကြာဖြင့် အချစ်ပုဒ်မ ၁၅၀၀နဲ့
စာသားတွေမြောက်လာသလိုပဲ .... ။
ဒီလိုနဲ့ ... ... ...
စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ချစ်ခဲ့တာပါတဲ့လေ .... .... ။
အလွမ်းရှင်တစ်ယောက်ပါနော် .... ။
ဈေးမဖြတ်ပါနဲ့ ချစ်သူရယ် ....
ယောကျာင်္းတန်မဲ့ မျက်ရည်ကျမှာဆိုးလို့လေ... ... ...။
Posted by mhyaw lint at 6:23 AM
ပျားမတုတ်ပဲ ပါးတစ်ချပ်အရိုက်ခံရတာအဆန်းလား …..
Posted by mhyaw lint at 7:32 AM